14-တစ်နှစ်တာအဘိဓါန် Old9လဘို့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့
အောက်တိုဘာလ 9, 2013 တွင်တစ်ဦးအသက် 14 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦး Conway, New Hampshire အတွက် Kennett High School တွင်ကျန်ရစ်နှင့်သူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းကြောင်းအားဖြင့်အိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်တော့တာပဲ။ သူမသည်သူမ၏လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်း 2:30 pm အချိန်နှင့်3နာရီအကြားအတော်ကြာစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျ, ဒါပေမယ့်သူမအိမ်ကဖန်ဆင်းခဲ့ပါဘူး။
ကိုးလအကြာမှာနင်္ဂနွေနေ့, ဇူလိုင်လ 20, 2014 တွင်, ပြည်နယ်ရှေ့နေချုပ်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက် "သူမ၏မိသားစုနှင့်အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့" နှင့်မိသားစု privacy ကိုမေးခဲ့ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
ထို့အပြင်အာဏာပိုင်များမီဒီယာမှသမျှမျှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးခြင်း, နှုတ်ပိတ်ရေငုံကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့ကြသည်။
ဇူလိုင်လ 29, 2015 - 14 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးပြန်ပေးဆွဲကိုးလကြာသူမ၏သုံ့ပန်းကိုင်ပြီးစွပ်စွဲတစ်ဦးက New Hampshire လူကိုယခုအမှု၌ဦးဆောင်အစိုးရရှေ့နေခြိမ်းခြောက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ က Nathaniel Kibby, မလျော်ကန်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုပြစ်မှုဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်, နှင့်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှု obstructing ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစွဲချက်သူမှတျတမျးတငျထားခဲ့သည့်အကျဉ်းထောင်ကနေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကနေရပ်တ။ အဆိုပါကာရိုးကောင်တီအိမ်မှန်ကန်သော၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုခုနှစ်, Kibby တွဲဘက်ရှေ့နေချုပ်ဂျိန်းလူငယ်ထိခိုက်စေရန်အောက်တန်းခြိမ်းခြောက်မှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Young ကဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများလက်ခံရရှိသူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အခြားနှစ်ဦးကိုအသစ်သောစွဲချက်တွေဟာနေစဉ်မလျော်ကန်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတာဝန်ခံတစ်ဦးပြစ်မှုဖြစ်ပါတယ် အမှားတွေ ။
Kibby ရဲ့စမ်းသပ်မှုသူဟာအိမ်မှာကသူ့ Gorham မှ ယူ. ခြိမ်းခြောက်မှုများကို အသုံးပြု. ရှိနှင့်သိုလှောင်မှုသွန်းအတွက်ဆက်လက်ရှိနေရန်သူမ၏အတင်းအကျပ်သူတစ်ဦး Conway အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများ၏ပြန်ပေးဆွဲနှင့်ဆက်စပ်သော 205 စွဲချက်တစ်ခုရင်ဆိုင်နေရမတ်လ 2016 ခုနှစ်တွင်စတင်စီစဉ်ထားသည် Stun သေနတ် , ဇစ် ဆက်ဆံမှုနှင့်ထိတ်လန့်ကော်လာ။
Kibby 205 စွပ်စွဲချက်အပေါ်စွဲချက်တင်
ဒီဇင်ဘာလ 17, 2014 - 14 နှစ်အရွယ်တစ်ဦးက New Hampshire ပြည်နယ်ပြန်ပေးဆွဲကိုးလကြာသူမ၏သုံ့ပန်းကိုင်ဆောင်မှုအတွက်အဖမ်းခံခဲ့တစ်ဦးကလူကိုအမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် 200 ကျော်စွဲချက်အပေါ်စွဲချက်တင်ထားသည်။ ယင်းစွဲချက်၏ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင်က Nathaniel Kibby ထောင်ထဲမှာရှိသူ၏ဘဝ၏ကျန်သုံးဖြုန်းနိုင်ဘူး။
Kibby ပြန်ပေးဆွဲအပါအဝင် 205 စွဲချက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး, လုယက်မှု, ပြစ်မှုဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်တစ်ခုအီလက်ထရောနစ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း device ကိုတစ်ဦးသေနတ်နှင့်တရားမဝင်အသုံးပြုမှုတရားမဝင်အသုံးပြုမှုအပေါ်စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။
ယင်းသည့်အခါ ခမ်းနားဂျူရီအပေါ်စွဲချက်တင် ယခုအပတ်ဖြန့်ချိခဲ့သည့်စွဲချက်များ 150 ကျော်ဟာဆယ်ကျော်သက်သားကောင်မှထပ်မံအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်အားထုတ်မှုအတွက် redacted ခဲ့ကြသည်ဟုအာဏာပိုင်များကပြောသည်။ သူများသည်စွဲချက်မိန်းကလေးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးမှဆက်စပ်နေပါတယ်။
redacted မခံခဲ့ရကွောငျးအပေါ်စွဲချက်တင်၏အစိတ်အပိုင်းများအဆိုအရ Kibby သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအတွက်သူမ၏ကိုးလအတွင်းမှာသူမ၏ကျော်ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မိန်းကလေး, သူမ၏မိသားစုနှင့်သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတစ် Stun သေနတ်တစ်ဦးခွေးထိတ်လန့်ကော်လာ, ဇစ်ဆက်ဆံမှုနှင့်သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
သူမသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော၌ရှိ၏နေစဉ်, Kibby သည်ဆယ်ကျော်သက်ပေးနေရတာကိုသူမ၏ဦးခေါင်းနှင့်မျက်နှာကျော်တစ်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်, သူခံခဲ့ရသည်နေစဉ်အိပ်ရာမှ ZIP-ချည်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်သံခမောက်လုံးကိုကျော်သွင်းထားလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်သူသည်သူမ၏ထိန်းချုပ်ဖို့အတုစောင့်ကြည့်ကင်မရာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူလည်းသူသည်မိမိသားကောင်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအများအပြား၏စွန့်ခြင်းဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုဖျက်ဆီးမှုအတွက်စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ပျောက်ဆုံးနေစဉ်သို့သော်မိသားစုကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း website တစ်ခုဖွင့် setting, ထိုအမှု၏ကျယ်ပြန့်လွှမ်းခြုံရှာ၏။ Kibby ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်တောင်မှပြီးနောက်, မိသားစုသားကောင်နာမည်၎င်းတို့၏ရှေ့နေမှတဆင့်ထုတ်ပြန်ချက်များ လုပ်. , နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုယ်ကို Kibby ရဲ့ arraignment မှာထင်ရှားကျနော်တို့အစောပိုင်းကသတင်းပို့သည်အတိုင်း, တရားခွင်၌အတွက်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ About.com ရာဇဝတ်မှု & အပြစ်ဒဏ်က်ဘ်ဆိုက်ရှေ့ဆက်သွားလွှမ်းခြုံအတွက်သားကောင်ရဲ့အမည်နှင့်ဓာတ်ပုံကိုမသုံးပါလိမ့်မယ်။
'' ပြော. အကြမ်းဖက်မှုများပြားလှသောတမန်တော် ''
သြဂုတ်လ 12, 2014 - အသက် 14 နှစ်မှာပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ကိုးလအကြာမှာအိမ်ကပြန်လာသောသူက New Hampshire ပြည်နယ်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်တစ်ရှေ့နေမိန်းကလေးသူမ၏သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောစဉ်အတွင်း " ပြော. အကြမ်းဖက်မှုမြောက်မြားစွာလုပ်ရပ်များ" ခံစားခဲ့ရနှင့်ယခုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်အချိန်နှင့်အာကာသလိုအပ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။
မိုက်ကယ် Coyne, Abby ဟာနန်ဒက်ဇ်များအတွက်ရှေ့နေနှင့်သူမ၏မိခင်က "Abby မူလစာမျက်နှာယူခဲ့" က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအောက်ပါကြေညာချက် posted:
အဘိဂဲလဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့်သူမ၏မိခင်, Zenya ဟာနန်ဒက်ဇ်၏ကိုယ်စားတွင်ကျနော်တို့ New Hampshire ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့, အက်ဖ်ဘီအိုင်, အ Conway ရဲဌာန, ဒီအားထုတ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည့်အများအပြားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများရှိသမျှတို့, Conway ၏အသိုင်းအဝိုင်း, အကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Abby ရဲ့ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆုတောင်းလေ၏ Abby ရဲ့လုံခြုံပြန်လာဘို့အဖြစ်သူမ၏အာရုံရောက်စေဖို့မီဒီယာရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဂရုစိုက်ကြောင်းနယူးအင်္ဂလန်နှင့်လူတိုင်းလူ ပြန်ပေးဆွဲ နှင့်သူမ၏အံ့ဖွယ်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်အတူကူညီ။
Abby ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအချို့သောအချိန်နှင့်အာကာသလိုအပ်ကြောင်းနှင့်လိုသည်။ ဒါဟာ Abby နှင့် Abby ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းအားကောင်းရဖို့အတှကျတရားမျှတမှုလိုက်စား၌ရှည်လျားသောဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်မယ့်နေသည်။ ငါတို့သည်ဤကိစ္စတွင်စာနယ်ဇင်းအတွက်ကြိုးစားခဲ့ရှိသည်ဖို့ရည်ရွယ်ကြပါဘူး။ တရား system ကိုရှေ့ဆက်လှုံ့ဆျောနှင့်အထောက်အထားထင်ရှားနေသည်နှင့်အမျှ, ဒီကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေဖြေကြားပါလိမ့်မည်။ Abby အကြမ်းဖက်တဲ့သူစိမ်းများကပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရသည်။ လပေါင်းအတော်ကြာအောင်သူမက ပြော. အကြမ်းဖက်မှုမြောက်မြားစွာလုပ်ရပ်များခံစားခဲ့ရသည်။ သူမ၏ယုံကြည်ခြင်း, အသည်းနှင့်ခံနိုင်ရည်မှတဆင့်သူမ၏မိသားစုနှင့်အတူယနေ့နှင့်နေအိမ်အသကျရှငျဖြစ်ပါတယ်။
Abby ရိုးရှင်းစွာဤကိစ္စတွင်ရှေ့ဆက်လှုံ့ဆျောပေးသကဲ့သို့သင်တို့သူမ၏ဆန္ဒကိုနှင့်တရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလေးစားကြောင်းမေးတယ်။ ကျနော်တို့တရားမျှတမှုအမှုကိုပြုလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ Abby ကိုယ်စားကျနော်တို့သင်ဤသူငယ်၏သုခချမ်းသာဖို့အထိခိုက်မခံဖြစ်နှင့်သူမ၏သူမကလိုအပ်တဲ့အချိန်နှင့်အာကာသပေးသောမေးဖို့ - ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အလိုရှိကြသည်သို့မဟုတ်သူမရှိပါတယ်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရသူကိုတဦးတည်းကိုခစျြမယ်လို့ ။
ဇူလိုင်လ 29, 2014 - အနည်းငယ်သာအရာရှိတဦးကသတင်းအချက်အလက်မရရှိနိုင်ပါနှင့်အတူ, ထင်ကြေးသူမကိုးလကြာပျောက်ဆုံးခဲ့သည်ကြောင့်, ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်, ထိုရိုင်းပွေးသူမသည်ကလေးရှိသည်ဖို့ သွား. ထို့နောက်သူမ၏မိသားစုမှနေအိမ်ပြန်သွားကြ၏။
Abby ၏ပျောက်ဆုံးမှုပတျဝနျးကငျြနက်နဲသောအရာကိုအချို့တို့သည်အမှုနှင့် ဆက်စပ်. တစ်ဦးအသက် 34 နှစ်အရွယ် Gorham, New Hampshire ယောက်ျား၏ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်အတူထင်ရှားလတံ့လာတယ်။ က Nathaniel အီး Kibby ဇူလိုင်လ 28, 2014 တွင်အဖမ်းခံရနှင့်ပြစ်မှုပြန်ပေးဆွဲဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
သို့သော်သောအခါထိုအင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 29, 2014, တိုက်နယ်ဝင်းအတွင်းတွင်အစိုးရရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနေဆဲ On-going စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်. အများအပြားအသေးစိတ်ကိုထုတ်မခံခဲ့ရရုံးထုတ်ခဲ့သည်။
Kibby ရဲ့ရှေ့နေ, ပြည်သူ့နောက်ခံလူယေရှဲ Friedman, မိမိ client ကိုအကြံပေးဖို့ဘယ်လိုသိကြနိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းမရှိနှင့်ရှာဖွေရေးရမ်းကျမ်းကျိန်လွှာကျော်ဖွင့်ရန်အစိုးရရှေ့နေများအတင်းရန်တရားသူကြီးကိုမေး၏။
"ကျနော်တို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ငါတို့သည်သောသူအပေါင်းတို့သည်စာရွက်တစ်ရွက်သောအနေအထားကိုရောက်နေ," Friedman ရဲတိုင်ကြားချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကဆိုသည်။ "လုံလောက်စွာ Nate ခုခံကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ (အခြားစာရွက်စာတမ်းများ) ထိုကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ "
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စက္ကူ၏အပိုင်းအစသူပြန်ပေးဆွဲ၏ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူကပြောသည်ရာ Kibby ဆန့်ကျင်တဝါကျရဲတပ်ဖွဲ့တိုင်ကြားချက်ဖြစ်ပါတယ် "သိလျက်သူမ၏ဆန့်ကျင်ကာပြစ်မှုကျူးလွန်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ AH ချုပ်ထား။ "
အဆိုပါတိုင်ကြားစာပြစ်မှု Kibby ဟာနန်ဒက်ဇ်ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်သောအရာကိုသတ်မှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။
"ငါစက္ကူ၏ဤအပိုင်းအစအပေါ်ဘာထက်အခြားသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမှရည်ညွှန်းသောအရာကိုပြစ်မှုမျှစိတ်ကူးရှိသည်," Friedman ကဆိုသည်။ "ငါသည်အခြေခံဥပဒေအရ Nate ခုခံကာကွယ်တဲ့ကိစ္စအဖြစ်မသေချာဘူး, ငါသည်အပင်ငါမသိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနှင့်အတူတရားစွဲဆိုခံရမယ့်အဘယ်အရာကိုသူ့ကိုရှင်းပြနိုင်တယ်။ "
တွဲဘက်ရှေ့နေချုပ်ဂျိန်းလူငယ်သူမကရုံကျမ်းကျိန်လွှာ unseal မှကာကွယ်ရေးရဲ့ရွေ့လျားမှုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်တရားရုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာသူမတုံ့ပြန်ရန် 10 ရက်ခဲ့ကြောင်းတရားရုံးကပြောကြားခဲ့သည်။ Young ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုကျမ်းကျိန်လွှာအတွက် On-going နှင့်သတင်းအချက်အလက်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးထိခိုက်နိုင်ကြောင်းတရားသူကြီးကိုပြောသည်။
Young ကမေးခွန်းတစ်ခုကိုအတွက်ရှာဖွေရေးရမ်းအချိန်တွင်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်သူတို့ပိုပြီးရှာဖွေရေးရမ်းမေတ္တာရပ်ခံစေခြင်းငှါရှာတွေ့သောအရာကိုပေါ် မူတည်. ခံခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
Gorham အတွက် Kibby ၏မိုဘိုင်းအိမ်ကသတင်းထောက်များကိုအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံတွေ Kibby ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးအတွက်သွန်းလောင်းနေတဲ့သိုလှောင်မှုအဖြစ်ကို set up ခံရဖို့ထငျရှားသောသတ္တုရေကြောင်းကွန်တိန်နာန်းကျင်ကရဲရာဇဝတ်မှုတိပ်ပြသခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များ Abby ကြောင့်ကွန်တိန်နာအတွင်းမှချုပ်ထားခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုမဟုတ်ဘူး။
တရားသူကြီး Pamela Albee ကာကွယ်ရေးရွေ့လျားမှုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်မှတ်တမ်းများအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သူမလည်းအမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းမရှိကြားနာသြဂုတ်လ 12 ခန့်ထား၏။ သူမသည် $ 1 သန်းမှာ Kibby ရဲ့အာမခံကိုထားသူနှောင်ကြိုး post နိုင်ခဲ့သည်ဆိုပါကဖြည့်ဆည်းရန်ရှိသည်မယ်လို့အခြေအနေများထားကြ၏။
Abby သူမရဲ့ Abductor ရငျဆိုငျရ
Abby ဟာနန်ဒက်ဇ် Kibby ရဲ့ arraignment တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအသက် 15 နှစ်အရွယ်အစ်မမိခင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်တရားခွင်၌သို့လမ်းလျှောက်နှင့်အခြားထောက်ခံသူတွေနဲ့အစိုးရရှေ့နေရဲ့စားပွဲပေါ်မှာနောက်ကွယ်မှမျက်နှာစာတန်း၌ထိုင်တော်မူ၏။ သူမသည်တရားခွင်၌ left အဖြစ်သူမပြောစရာရှိခဲ့လျှင်, ဆယ်ကျော်သက် "အမှတ်" ခိုင်မြဲစွာသူတို့ကိုပြောပြသည်သတင်းထောက်တွေကိုမေး
ကြားနာအပြီးတွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြည်နယ်ရှေ့နေချုပ်သည်ယောသပ် Foster, အက်ဖ်ဘီအိုင်၏ Kieran ရမ်းဆေးနှင့်လူငယ်တို့အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ သူတို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အနည်းငယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေး. , ဒါပေမဲ့သူတို့က Abby နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အတူကူညီသူမ၏မိသားစုတစ်စု၏ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုချီးမွမ်းကြ၏။
ချီးကျူးလိုက်ပါတယ် Abby ရဲ့ရဲစှမျးသတ်တိ, အစွမ်းသတ္တိ
FBI ကအေးဂျင့်ရမ်းဆေးရပ်ရွာနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးများ၏အဖွဲ့သည်တစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရအကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့အတွက်အရေးကြီးသောပြောသည်ပေမယ့်အကြွေးအများစု Abby တတ်၏။
"Abby သူ့ကိုယ်သူသူမ၏ရဲစွမ်းသတ္တိမှတဆင့်သူမ၏ဘေးကင်းလုံခြုံပြန်လာကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်အိမ်ပြန်လာမှဖြေရှင်း," ရမ်းဆေးကပြောပါတယ်။
မိသားစုဝင်များ Abby အလေးချိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်သူမဇူလိုင် 20. အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာအာဟာရချို့တဲ့ထင်ရှားသူကပြောပါတယ် "သူမသည်ကျောသူ့အစွမ်းသတ္တိတည်ဆောက်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်နှင့်ကျွန်တော်မကြာခင်သူမအစိုင်အခဲအစားအစာများအပေါ်ပြန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်" ဟုမိသားစုကဆိုသည်။
"Abby အလွန်ပါးလွှာနှင့်အားနည်းနေတယ်။ ကျနော်တို့သူမ၏စားရန်လာပြီဆီသို့ဦးတည်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်," မိသားစုမိတ်ဆွေတစ်မန်စမစ်တစ်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ "Abby ကဒီကတဆင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရဲစွမ်းသတ္တိကိုပြသထားသည်။ သူမသည်နေအိမ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်ရုံသူမ၏ကျန်းမာရေးပြန်ရရှိရန်ကြိုးစားနေ, အနားယူ, လျှော့ပေါ့၏။ "
သူမက Nathaniel Kibby ဇူလိုင်လ 29 ရင်ဆိုင်ရဖို့တရားခွင်၌သို့လမ်းလျှောက်သည့်အခါသူမအားနည်းနေပေမယ့်ဘာမှမကြည့်ရှုကြ၏။
Pedophiles နှင့်ကလေး Killers
ခင်ပွန်း Killer ကယ်လီ Gissendaner ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
'' ဒီလည်ဆွဲ '' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အောက်ဖော်ပြပါများမှ Pavel ခရိုအရှေစစ်ပွဲပြစ်မှုဆိုင်ရာ
နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးတစ် Pair ကိုရွေးချယ်ခြင်း
Matzah Make လုပ်နည်း
အဆိုပါ Peripheral အာရုံကြောစနစ်အကြောင်းလေ့လာပါ
Cómo elegir un buen abogado က de inmigración en Estados UNIDO
"ဒန်နီ Boy" Lyrics နှင့်သမိုင်း
ထိပ်တန်း 10 Beatles ကလေးချော့တေအယ်လ်ဘန်
Mercapto Group မှအဓိပ္ပာယ်
ဗြာဒိတျ Signify ၏7ချာ့အဘယ်အရာပါသလား
အဆိုပါကို Message ပေးပို့သူ
ကျော်တစ်ခုမှာအကြောင်းအရာနှင့်အတူ '' Gustar '' အသုံးပြုခြင်း
Verifica el costo က de los အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များ cada UNO က de los estados en